प्रियंकाले लगाइन् यस्तो ‘ड्रेस’, फ्यानहरूले सोधे– कसको लुंगी हो ? – ramechhapkhabar.com
प्रियंकाले लगाइन् यस्तो ‘ड्रेस’, फ्यानहरूले सोधे– कसको लुंगी हो ?
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा यतिखेर ट्रोलको शिकार बनेकी छन् । आफैंले लगाएको पहिरनलाई लिएर प्रियंका ट्रोलको शिकार बन्नुपरेको हो । उनले एक कार्यक्रमका लागि गिंगम ड्रेस लगाएकी थिइन् । पँहेलो र कालो कलरको डो डेस निकै खुल्ला छ । प्रियंका यस पहिरनमा निकै खुलेकी छन् ।
उनले लगाएको यसै पहिरनलाई लिएर उनका फ्यानहरूबाटै उनी ट्रोल बनेकी हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको कपडालाई लुंगीसँग तुलना गरेका छन् ।
रानीको जन्मदिनमा ‘मिसेस चटर्जी भर्सेस नर्वे’को घोषणा
बलिउड नायिका रानी मुखर्जी आज आफ्नो ४३ औं जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । सन् १९७८ मार्च २१ मा जन्मिएकी रानीको जन्मदिनको अवसर पारेर नयाँ चलचित्रको घोषणा गरिएको छ ।
रानीको मुख्य भूमिका रहने चलचित्र ‘मिसेस चटर्जी भर्सेस नर्वे’को घोषणा गरिएको हो । यो चलचित्रले एक आमाको संघर्ष र लडाइको कथा भन्नेछ । वास्तविक कथामा बन्न लागेको यो चलचित्रको छायांकन चाडै नै सुरु हुने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
रानीले यो चलचित्रलाई आफ्नो करिअरकै विशेष चलचित्र भनेकी छिन् । जन्मदिनमा घोषणा भएको चलचित्रको बिषयमा भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै रानीले भनिन्–‘जन्मदिनको सुरुवात यो भन्दा विशेष अरु तरिकाबाट हुनै सक्दैन । मेरो २५ बर्ष लामो बलिउड करिअरमा मैले करिअरकै विशेष चलचित्र साइन गरेकी छु । यो चलचित्र म सम्पूर्ण आमाहरुप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु ।’
रानीले लामो समयदेखि यो चलचित्रको कथा पढेको र यसलाई आफूले विशेष चलचित्रको रुपमा लिएको बताइन् ।